... 4:06:00 PM
မှတ်သားသွားပါတယ်။ အလုပ်ရှင်တွေပြောတာမှန်ပါတယ်။ ကိုယ်က pass holder မို့လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်တမ်း အလုပ်လုပ်တဲ့ အခါမှာ နိုင်ငံခြားသားတွေက ပိုပြီးအလုပ်လုပ်ရပါတယ်။ မလုပ်ရင် မဖြစ်တဲ့ အခြေအနေကြောင့်လည်းဖြစ်ပါ လိမ့်မယ်။
မျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးပါ။ အခုဆို ရုံးမှာ ဖြုတ်ပြီးတာလည်း များပြီ။ ထပ်ခန့် တော့လည်း စလုံးတွေပဲ။
ကျွန်မကလည်း အစ်မက အရမ်းပြောနေတဲ့ကြားက မအားတာအကြောင်းပြပြီး အခုထိ PR ကို မလျှောက်ချင်သေးဘူး... ခက်တယ်။
8 June 2009 at 6:29 PM
အင်း အစိုးရကလဲ သူ့နိုင်ငံ ကိုရေတိမ်မနစ်စေလို နိုင်ငံသားတွေကလဲ သိပ်ကို အခွင့်အရေးလိုချင် ဘာတွေဖြစ်လာမယ်မသိပါဘူးဗျာ
ကိုခရောင်း CBox မှာ ပြောသွားတာလေးက ဒီပိုစ့် အတွက်မို. သူရဲ့ခံစားချက်လေးကိုထည့်ထား လိုက်ပါတယ်.
8 June 2009 at 9:10 PM
နေခြည်ရေ သတင်းပေးရုံပါဗျာ ....
မယ်ကိုးရေ ဘာဖြစ်တုံး စာရေးစားကြတာပေါ့ ... ပိုက်ပိုက်ကတော့ လိုက်ချီးမယ်လေး ဟာဟ
ကိုဒီပကြီးရေ ယုံပါတယ်ဗျာ ..... ကျွန်တော်တို.က အခြေ အနေကြောင့်လေ... သတင်းပေးတာပါဗျာ
ခရောင်းရေ.. ဘာမှစိတ်မပူနဲ. မကြာခင်အဆင်ပြေ သွားလိမ့်မယ်.........
Zaw Myo Aung said...
Thanks for ur post. I copied and used it in my Facebook. :P
18 June 2009 at 12:09 AM